ဤဂိမ်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဤ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားခွင့်ရှိသည် :
အပါတ်စဉ် ဂိမ်းလက်မှတ် ၄ စောင်ရယူပါ။
သင် ကြိုက် နှစ်သက်သောဂိမ်းတွေ ကို ဂိမ်းလက်မှတ် နဲ့ ဝယ် လို့ ရသလို လက်မှတ်တွေကို စုဆောင်းထားလို့လဲ ရပါတယ်
ဂိမ်း အားလုံးကို ၅၀% လျော့ ပြီးရယူ လိုက်ပါ။
သင့် အတွက်ရာပေါင်း များစွာသော ဂိမ်း တွေ ရှိ တဲ့ အပြင် အပါတ်စဉ် အသစ်တွေ ရှိနေ တယ် နော့!
ဖုန်း ဒေတာ ဘေလ် ကုန်ကျမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းအများစုမှာ 50MB ထက်နည်းပါတယ်။
ထပ်မံ ပေးဆောင်စရာ မလိုပဲ အချိန်မရွေး ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်း နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ် အကောင့် စာမျက်နှာ မှ နေ၍ အချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်း နိုင်ပါတယ်။
အကူအညီလိုအပ်ပါက gamerheaven.myanmar@8elements.net သို့ ဆက်သွယ်နိင်ပါတယ်။
""သေချာသည်"" ကိုနိုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ၏ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူပါသည်၊ သင်၏ ဖုန်းဘေလ်မှ အခကြေးငွေ ကောက်ခံ ခြင်းကို လက်ခံပါသည်၊ ဟု သဘောတူခြင်း ဖြစ်သည်။
တပါတ်ကို ၄၀၀ ကျပ်သာ
ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်အသုံးပြူနိုင်သည့်ကာလမှာ ၃၆၅ ရက် ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ်/ လစဉ် အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုမှုအတွက် အဖိုးအခကို ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေမှာ တစ်ကြိမ် (ဥပမာ - သက်တမ်းတိုးမှု မပါသော သို့မဟုတ် နေ့စဉ်ကောက်ခံမှု မရှိသော) သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်လိုက် (ဥပမာ - အပတ်အလိုက်/ လအလိုက် ကောက်ခံမှုရှိသည့် ၃၆၅ ရက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ တယ်လီနော၏ မိတ်ဖက်ကုမ္မဏီများမှ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အခမဲ့စမ်းသပ်အသုံးပြု ကာလပါရှိပါက အသုံးပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အခမဲ့ စမ်းသပ်အသုံးပြုကာလအတွက်သာ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခမဲ့စမ်းသပ်ကာလ ပြီးဆုံးပါက သင်၏ မိုဘိုင်းလက်ကျန်ငွေထဲမှ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ်/ လစဉ် ကျသင့်ငွေကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသည်ဟု အတည်ပြုမှုသည် ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ကိုယ်တိုင်အသိအမှတ်ပြု လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ခံပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံပြီး ဖြစ်ပါသည်။
GAMERHEAVEN အဖြဲ႕ ဝင္ရန္
လိုက်နာရန် စည်း ကမ်းများ အကူအညီ FAQ ©2020 8elements. All rights reserved.